JINGHPAW KASA: ကားမိုင်းမြို့ ရဲစခန်းကို ကေအိုအေ သိမ်းပိုက်
ကားမိုင်းမြို့ ရဲစခန်းကို ကေအိုအေ သိမ်းပိုက်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ဖားကန့်လမ်းပေါ်ရှိ ကားမိုင်းမြို့မှ ဗမာအစိုးရ ရဲစခန်းကို ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ မနက် (၄း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာအစိုးရ ရဲစခန်းကို ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ရာ ရဲသားတစ်ဦး သေးဆုံးပြီး၊ လက်နက်များ သိမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကားမိုင်းရဲစခန်း အတွင်းရှိထောင်ထဲမှ မတရား ဖမ်းဆီး ထောင်ချထားသော အကျည်းသားများကို ကေအိုအေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
KIA soldiers occupied Kamaing police station, it is situated on the Mohgaung and Kamaing road which is under KIA (2nd) brigade area at 04:00 AM on 18th December according to KIA front line officer report. One Burmese police were killed, took many weapons and released the prisoners.
ပြည်သူတွေ ငတ်ပြီသေတော့မယ် လုပ်စားလည်းမိုင်းက ကွဲကြာရင်မ လွယ်ဘူးသနားကြပါအုံး
ယောက်ဖရေ ကာမိုင်းကိုမင်းတို့သိမ်းပြီဆိုတော့ လမ်းလေးပြင်ပေးပါအုံး။ငါတို့လာရင် လမ်းဆိုးလွန်းလို့ပါ ယောက်ဖရာ။
ရဲ ကို တော့ နိူင် စား နေ ကျ ပါ။၁၀ နှစ် မှ သေ နတ် တ ချက် မှ မ ပစ် တဲ့ ကောင် ကို တော့ နိူင် တယ် ဗျ။
အရမ်းတော် တယ် kia တွေ
kia70လောက် နဲ့ ရဲ ကို သွား ချ တာ။ သတ် တိ ကောင်း ချက် က တော့ KIA ကလက် နက် ကြီး အ ချက် ၄၀ လောက် သုံး တယ် ဆို ဘဲ။
fuck you n myanmar
Don't try to insult KIA anymore....
it is just because i worry that all of you will get tired...... because we, Kachin people don't care your voice...
we just care our History... This Land, Kachin Sate is our land not yours....
look at the history... if you are an educated person.. if you are the one who stand on the right side.....
you will know KIA are right.....
fool!kia က လု တာ တော် တယ်။
yes,right...... kia has robbed al lthe state -people
kia က ကားမိုင်းရဲစခန်း ဝင်စီးတာ
ဂုဏ်ယူနေတယ် ဟီး ဟီး ဟီး
မိန်းမထမိန် သာဝတ်ထားလိုက်တော့kia ရေ့ 
ဖမ်းထားတာပါ kia အနေနဲ့ ဘိန်းရောင်းတာ
Min: ga-4htor: dè kaung lar?Di lout ti nay da.
Yè-4 ta ma lar?
I wanna say something for burmese soldiers you all born for your wives fight for your general die for your democrzy government ..and your ending at the hell...but your mother give birth for what?for proud or sad?
ုKIA က ပစ်ပြိးပြေးတာပါ..အပြေးမှာတော့ ဟူစိန်ဘော့ထက်မြန်တယ်နော်..စစ်တပ်ကတကယ်လုပ်ရင်တော့လား...သတိထားKIA ရေ..လိုင်ဇာစခန်းအပြီးသိမ်းဖို့က..၄နာရီပဲကြာမှာ.. လိုင်ဇာကျသွားရင်..ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြောစရာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ..
KIA..တွေ ဘိန်းစိုက်စားနေတာ..လူတိုင်းသိတယ်.. ဘိန်းနဲ့ထောပြီး..ရန်ကုန်မှာပြောင်းနေကြတယ်..မယုံရင် sundayမှာ..ချမ်းသာလမ်း.စမ်းချောင်းက ကချင်ဘုရားကျောင်းမှာလာကြည့်ပါ..
gold moon မင်းကဘာကောင်လဲခွေးလောက်တောင်စဉ်းစားဥာဏ်မရှိဘူးလား
kia ကိုဆော် မှရတော့ မှာ
ဒါပေ မယ့် နင် ထက် တော့ သာ တယ် li လ ဒ ရဲ့။
WTF >> (KIA)